किन झर्छ कपाल ? कसरी गरिन्छ प्रत्यारोपण ?
२०७६ श्रावण २६ आइतबार ०८:१३:००
काठमाडाैं । पछिल्लो समय मानिसहरु बढी व्यस्त हुने हुँदा कपाल झर्ने समस्या बढी देखिने गरेको छ । कपाल झर्ने समस्या बढ्दै गएर कम उमेरमै तालुपना देखिन्छ । जसले गर्दा हिनताबोधसँगै तनावको समस्या ल्याउछ । अब त्यस्तो हिनताबोध र तनाव लिएर हिड्नुपर्ने दिन छैनन् । नेपालमा नै सस्तो मूल्यमा कपाल प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । तर कपाल प्रत्यारोपण कस्तो स्थानमा गर्दैछु भन्ने कुरालाई भने ध्यान दिनैपर्छ ।
सहरी क्षेत्रमा कपाल प्रत्यारोपणका बारेमा जानकारी बढ्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय धेरै मानिसहरु आफ्नो कपालको बारेमा चिन्तित देखिने गरेको पाइन्छ । चिन्तित हुनु पनि पर्छ । कपाल हाम्रो शरीरको मुल ढोका हो । हामीले अनुहारको हेरचाहमा जसरी समय दिन्छौं, त्यसरी नै आफ्नो कपालको हेरचाहमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । प्रायःजसो कपाल झर्नेबित्तिकै धेरै महिला दिदीबहिनीहरु कपाल प्रत्यारोपण गनुप¥यो भन्दै आउनु हुन्छ । तर कपालको रोगहरुका कारण पनि कपाल झर्छ । कपाल झर्नेबित्तिकै कपाल प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । सुरुमा कपालको चेकजाँच गर्ने, रगत, थाइराइड र हर्मोनको चेकजाँच गरेर गरिन्छ । कतिपयलाई कपाल विभिन्न समस्या आएर पनि कपाल झर्ने हुन्छ, त्यसको औषधि लिएर निको हुन्छ ।
त्यसैगरी, नेपालमा कपाल प्रत्यारोपण करिब २० वर्ष अघिदेखि नेै सुरु भएको हो । तर त्यो समयमा कपाल प्रत्यारोपणको बारेमा जानकारी थिएन । पछिल्लो करिब पाँचवर्ष यता कपाल प्रत्यारोपणको बारेमा मानिसमा जानकारी बढ्दैछ ।
कपाल प्रत्यारोपण तालुपनाको समस्या भएको अवस्थामा कपाल प्रत्यारोपण गरिन्छ । तालुपनाको समस्या देखिनुमा वंशाणुगत र तनावका कारणले नै हुन्छ । फाइबर फाइजाइट् टेस्ट इन्जाइम हाम्रो निधार र तालुको कपालको जरामा हुन्छ । यो इन्जाइमका कारण २० वर्षपछिमात्र कपाल झर्ने समस्या देखिन्छ ।
त्यसैगरी, पुरुषमा तालुपनाको समस्या हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ तर महिलामा त्यो समस्या थाहा हुँदैन । महिलाहरुमा महिनाबारीको समयमा, थाइराइड र तनावलगायतका कारण कपाल झर्ने समस्या देखिन्छ । गर्भवति, सुत्केरी र स्तनपान गराउँदा कपाल झर्ने समस्या देखिन्छ । तर यस्तो अवस्थामा कपाल प्रत्यारोपण गर्नुहुँदैन । पोलेको दाग वा खतहरुमा पनि कपाल प्रत्यारोपण गरिन्छ ।
जुन नेपालमा अन्य देशको तुलनामा धेरै कम छ । कपाल जति प्रत्यारोपण गरिएको हुन्छ पछि त्यति नै पलाउँछ । प्रत्यारोपण गरिएको कपाल, काट्न सकिन्छ लामो बनाएर पाल्न सकिन्छ । कुनै समस्या आउँदैन । एकजना मानिसमा कपाल प्रत्यारोपण गर्न करिब १० देखि १६ घण्टा समय लाग्ने गर्छ । विगत पाँच वर्षयता मकहाँ कपालको समस्या लिएर दैनिक ३० देखि ४० जनासम्म बिरामीहरु आउनुहुन्छ । तर यस्तो कपालको समस्या लिएर आउनेमा महिला बढी छन् । तर कपाल प्रत्यारोपण गर्नेमा पुरुष बढी छन् । कतिपय पुरुषमा तनावको कारणले पनि तालुपनाको समस्या देखिन्छ ।
प्रायःजसोको मानिसको बानी दिनहुँ कपाल नुहाउने हुँदैन । तीन दिनपछि नुहाउँदा तीनसय वटा कपाल झर्नु सामान्य हो । त्यो कपाल झरेको होइन । तर कोही–कोही महिला दिदीबहिनीहरु डरले तनाव लिएर आउनुहुन्छ, “मेरो कपाल धेरै झर्छ भन्दै उपचारका लागि आउनुहुन्छ ।” तर कपाल झरेको हँुदैन, हामीले आफैँ झारेका हुन्छाँै । कसरी झारिएको भन्ने प्रश्न पनि आउने गर्छ ? हामीले कपाललाई बढी हेरचाह गर्दा गरेर वा कपालको हेरचाह नगरेर कपाल झर्ने हुन्छ ।
(धुलिखेल अस्पतालका छाला तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डा. कर्णसँग बाह्रखरी संवाददाता सञ्जिता खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित)